चिकित्सा शिक्षा विधेयकले आन्दोलनको मर्म समेटेन, अनसन तोडिन्न: डा. केसी
संसदीय समितिले शुक्रबार पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले ‘आन्दोलनको मर्म समेट्न नसकेको’ भन्दै डा. गोविन्द केसीले अनसन फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका छन्।
यही कानुन पारित भए मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन फेरि जालझेल हुन सक्ने भन्दै डा. केसीले असहमति जनाएपछि शिक्षा मन्त्रालयमा जारी वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको केसी पक्षका वार्ताकार डा. अभीषेकराज सिंहले जानकारी दिए।
संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले ‘मनसायपत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजलाई यो ऐन पारित भएपछि यसैमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको रहेछ भने सम्बन्धन दिन बाधा पुग्ने छैन' भनी लेखिएको छ। ऐनले मापदण्ड बनाउने काम चिकित्सा शिक्षा आयोगको हो भन्ने किटान गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको निम्ति छुट्टै मापदण्ड तय गर्ने व्यवस्था छ।
केसीले भने यही बुँदामा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यो प्रावधानअनुसार कानुन बने तुरुन्तै आयोग गठन गरी हतार–हतार लचिलो मापदण्ड बनाइने र त्यसै आधारमा सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका सबै मेडिकल कलेजले अनुमति पाउने उनको आशंका छ। यसको सट्टा ‘माथेमा प्रतिवेदनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्धन दिइनेछ’ भनी कानुनले नै किटान गर्नुपर्ने केसीको अडान छ। यो प्रावधान सुनिश्चित नहुँदै अनसन तोड्दा सम्बन्धनका लागि फेरि जालझेल हुनसक्ने उनले बताएका छन्। केसीको यही अडानपछि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो। हाल मनमोहन मेमोरियल, पिपल्स डेन्टल, नेसनल लगायत आधा दर्जन कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा छन्।
‘माथेमा प्रतिवेदनलाई कानुनको दफामै उल्लेख गरेर त्यसमा रहेका मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्नेमा केसीको अडान छ,’ वार्तामा सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई अहिले नै सुल्झाउन सकिएन भने भोलि आयोगले बनाउने मापदण्डका लागि फेरि अनसन बस्नुपर्ने उहाँको शंका छ।’
डा. केसीले राखेका अन्य मागमा पनि सहमति हुन सकेको छैन।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा डिन नियुक्ति, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को स्वायत्तता लगायत विषयमा सहमति हुन नसकेको वार्ताकार सिंहले बताए। सम्झौता हस्ताक्षरपछि मात्र डिन नियुक्तिको कुरा अघि बढ्ने सरकारी वार्ताकारको अडान छ।
आइओएमको स्वायत्तताका विषयमा डा. भगवान कोइराला संयोजकत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको राजीनामा लगायत मागमा पनि सहमति हुन सकेको छैन।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २७, २०७४, ०८:०३:१४